iPhone 11 Pro Max review: butere site The Epic ndụ batrị - News Ọchịchị
Enwere ezigbo ama ama ama ama dị n’etiti Apple, ma dị mwute ikwu na iPhone 11 Pro Max abụghị ya.
Nnukwu igwefoto, ihuenyo na arụmọrụ enweghị ike ịchekwa ergonomics dị egwu, ma ọ dịkarịa ala, ọ ga-adịgide ụbọchị abụọ na batrị
Isiokwu a na-akpọ “iPhone 11 Pro Max review: butere site The Epic ndụ batrị” bụ Samuel Gibbs onye nchịkọta akụkọ teknụzụ ndị ahịa, maka theguardian.com na Wednesde 9 Ọktọba 2019 06.00 UTC
Nke kachasị, ọnụ ọnụ ekwentị ọhụrụ kachasị ọnụ si Apple bụ iPhone 11 Pro Max, ị ga-achọkwa obere ego iji zụta ya.
Ọhụrụ 6.5in iPhone 11 Pro Max na-akwụ ụgwọ site na 14 1,149 ma na mmetụta ya dị ntakịrị 5.8in iPhone 11 Pro nwanne tinye na a photocopier na a 12% etinyere ogo.
O nwere otu ụdị aluminom na iko, otu notched ihuenyo na Face ID, otu ndokwa igwefoto na azụ na otu ọdụ ụgbọ mmiri ọkụ na ala. It is the same phone. Except that enlarging everything (apart from thickness) site 10%-12% creates a very different experience.
Like the iPhone XS Max it replaces, the iPhone 11 Pro Max is really difficult to use with one hand. At 77.8mm it is hand-stretchingly wide, wider still than the already massive OnePlus 7 Pro (75.9mm) and even the positively gigantic Samsung Galaxy Cheta 10+ (75.9mm), and at 226g it is heavier than competitors by a full 20g. But more than that, the rounded stainless steel sides provide no grip at all, meaning your fingers simply slip off them when you stretch across to reach the other side of the screen or the top left corner, which you frequently need to do in iOS.
It’s a combination that either results in hand pain or wallet pain, ka ọ na-amịpụ site na mkpịsị aka gị ma na - akụda n’ala na - enweghị mgbaghara n’okpuru. Then ga-arapara ya n’otu okwu, nke na - eme ka ọ karie. Ọ bụrụ na e nwere mgbe ekwentị ga - erite uru site na ijidesi ụdị ngwa ụfọdụ, nke a bụ ya.
Yabụ belụsọ ma inwere nnukwute aka, the iPhone 11 Pro Max bụ naanị ekwentị aka abụọ. Mana m ga-arụ ụka na enwere mgbe ụfọdụ ịkwesịrị iji ekwentị otu aka: ụgbọ njem ọha, ebu akpa, na-ewere selfie na na.
6.5in Super Retina XDR "Pro larịị" OLED ihuenyo dị oke ebube dịka nke dị na obere iPhone 11 Pro, ọ bụ ezie na ọ bụghị oke itu elu nke dabara na budata dị ọnụ ala karịa ndị ọzọ dị ka OnePlus 7 Pro. Tụgharịa ya na frosted, ọ fọrọ nke nta ka ọ dị ka iko na igwefoto igwefoto igwe nwere anya atọ na-apụ apụ bụ ihe ọhụrụ.
Ihuenyo: 6.5na Super Retina XDR (OLED) (458ppi)
Nchekwa: 64GB, 256GB ma ọ bụ 512GB
Sistemụ nrụọrụ: iOS 13
Igwefoto: Igwefoto azụ atọ na 12MP na OIS, 12MP n'ihu-eche ihu igwefoto
Njikọta: LTE, WiFi 6, NFC, Bluetooth 5, Àmụmà, Ultra Wideband na GPS
Akụkụ: 158 x 77.8 x 8.1 mm
Ọdụ ụgbọ mmiri Lightning na-arụ ọrụ nke ọma maka ịkwụ ụgwọ, mana ọ na-akụda mmụọ ịghara ịhụ USB-C n'oge a. Foto: Samuel Gibbs / The Guardian
The iPhone 11 Pro Max nwere otu mgbawa A13 Bionic, 4GB nke Ram ma ọ dịkarịa ala 64GB nke nchekwa dị ka ndị ọzọ iPhone 11 ahịrị, na-arụ n'otu aka ahụ,. Ihe niile na-eme ngwa ngwa, gụnyere ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ dị ka edezi vidiyo na egwuregwu, ọ kwesịrị ịbụ onye na-eme ihe nkiri kacha elu n'afọ ndị na-abịanụ.
Ojiji nke Lightning n'elu ihe ọhụrụ, ihe na-agbanwe agbanwe ma bara uru USB-C na-akụda mmụọ, dị ka 64GB nke nchekwa na-amalite. Ọ bụrụ n'ịchọrọ iji oke ekwentị gị lelee vidiyo ma ọ bụ kpọọ egwuregwu, ma ọ bụ ị gbaa nọmba ọ bụla nke foto ma ọ bụ vidiyo 4K, ị ga-ejupụta nke ahụ n’oge na-adịghị anya.
Apple kwuru na ọ jisiri ike mee iPhone 11 Nke a ga-ewe awa ise karịa n'etiti ebubo karịa iPhone XS Max, nke jisiri 27 awa na ule m.
The iPhone 11 Pro Max na-akụ aka na atụmatụ ụfọdụ, na-adịgide adịgide naanị nkeji oge ihere zuru ezu 48 awa n'etiti ebubo. Nke ahụ pụtara na ekwentị na-anọ site na asaa nke ụtụtụ n’abalị ahụ ruo ihe dịka 6.50am n’ụbọchị nke atọ, na-akpali ndị iPhone 11 Pro Max n'ime ụlọ ọrụ batrị ụbọchị abụọ nke mbụ jupụtara na igwe dị iche iche nke Huawei kacha elu.
Nke ahụ bụ mgbe iOS 13.1.2 update, mgbe ị na-eji ya dịka ngwaọrụ m bụ isi na-enweghị smartwatch agbakwunyere, eziga na anata 100 ozi ịntanetị na ozi, 80 inupụ notma Ọkwa, na-ege ntị ruo awa ise nke egwu na ekweisi Bluetooth, na-ekiri otu awa nke Netflix, na agbapụ banyere 10 foto otu ụbọchị.
The iPhone 11 Pro Max na-ebu ụgbọ mmiri nwere chaja 18W USB-C ngwa ngwa yana USB-C na Lightning cable na igbe ahụ. Ikwu ụgwọ zuru ezu si flat were were awa abụọ 20 nkeji, mana kụrụ 50% na 31 nkeji na 70% na 46 nkeji, slowing odori na a trickle n'elu 95%.
Ekwentị na-adị ezigbo mma mgbe ọ na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa. Ọ nwere ike na-ejighi eriri na-ana kwa, ma enweghị ike ịkwụ ụgwọ ngwaọrụ ndị ọzọ.
O kwesịkwara icheta na iOS 13 gụnyere njirimara njikarịcha batrị, nke e mere na-amụta gị àgwà na-ana batrị gara aga 80% mgbe ọ na-eche na ị chọrọ ya ịgbatị ogologo ndụ ya.
iOS 13 ewebata ihe ohuru ohuru na otutu chinchi. Foto: Samuel Gibbs / The Guardian
The iPhone 11 Pro Ẹnam ekese na iOS 13 ma emelitere ngwa ngwa ugboro atọ na iOS 13.1.2, na-eso otu okwu tara ahụhụ na iPhone 11.
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị, swipe dee na Apple kiiboodu, mma ngwa ntọala ohere na ịhụ nsọ okirikiri nsuso niile bụ ọhụrụ ọhụrụ nke iOS 13.
The iPhone 11 Pro Max nwekwara ntinye ole na ole maka nnukwu ihuenyo dị ka elekere ihuenyo na Mail, Kalinda, Ozi na ndị ọzọ na-anọghị na obere iPhone 11 Pro. Ọ na-akwado aghụghọ ole na ole iji nyere aka iji otu aka dịka iweta elu ihuenyo ma ọ bụ ibugharị kiiboodu n'otu akụkụ, nke onwe ya siri ike iji aka nri gị mee ka bọtịnụ rụọ ọrụ ọ dị na akuku aka ekpe nke ihuenyo ahụ.
Ọ bụ mmegharị azụ, nke bụ swipe na site na nsọtụ aka ekpe nke ihuenyo ahụ, nke ahụ bụ ihe na-egbu egbu maka onye ọrụ aka nri. Gbalị ime nke ahụ na otu aka bụ akụkụ nha anya na ụjọ.
Apple na-eduga ụlọ ọrụ na mmelite ngwanrọ, inye ọ dịkarịa ala afọ ise nkwado site na ntọhapụ, ebe ndi ozo na emeputa ihe dika ihe dika ato, ma gosiputara n'oge na-adịbeghị anya ikike dị ịtụnanya iji bulie mmelite ndozi ngwa ngwa ngwa ngwa.
Usoro igwefoto ọhụrụ atọ bụ nnukwu nzọụkwụ maka smartphones nke Apple, ke akpatre kenha ma ọ bụ na-akarị ndị kasị mma nke ndị ọzọ na foto. Foto: Samuel Gibbs / The Guardian
The iPhone 11 Pro Max nwere ntọala ọhụrụ nke atọ Apple 12-megapixel atọ - nke dịka nke pere mpe iPhone 11 Pro. Ngwakọta nke ultrawide, obosara na telephoto ese foto na-enye gị ike gbaa na 0.5x, 1x ma ọ bụ 2x ngwa anya mbugharị, wee ruo 10x mbugharị dijitalụ.
n'ozuzu, ọ bụ oke nzọụkwụ na igwefoto iPhone gara aga, ma ka mma karịa iPhone dị ọnụ ala 11. Nightdị abalị ọhụrụ nke Apple na-eweta ya na nke kachasị mma nke ya na obere foto ọkụ, mgbe ihe omimi ohuru ohuru na apinyere na iOS 13.2 na-abịaru nso karịa mgbe ọ bụla ka nghọta doro anya nke nkọwa zuru oke nke SLR nwere nnukwu oghere.
Foto ndị e jiri maka nyocha a gbara ihe niile na iPhone 11 Pro na-agba ọsọ iOS 13.2 beta.
Mgbe emechara mpi igwefoto asọmpi ruo oge ụfọdụ, Apple siri ike na nke kachasị mma na iPhone 11 Usoro akara.
The iPhone 11 Pro Max dị mma maka ikiri vidiyo, ma ya 226g ibu nwere ike ịbụ nnọọ yi mgbe na-agbalị ijide ya otu aka site na ọbụna dị a TV show. Foto: Samuel Gibbs / The Guardian
The iPhone 11 Pro Max bụ mmiri na-eguzogide ụkpụrụ IP68 nke ruru 4m maka 30 nkeji - nke bu 2m miri emi nke afo gara aga iPhone XS Max
Arụ ọrụ Bluetooth ka mma, nwere njikọ siri ike na ọbụlagodi isi ike na-ekweghị ike
ID ihu ka kacha mma na klaasị, ugbu a ubé ngwa ngwa na-arụ ọrụ na ubé wider akụkụ
Ihe mgbawa U1 ohuru na-enyere ike ime ka ọnọdụ kawanye mma, ma ruo ugbu a ọ na-eji naanị maka directional AirDrop faịlụ nkekọrịta
The ukwuu polished igwe anaghị agba nchara dị mfe akara na dull na ọbụna akpachapụ anya n'ozuzu ojiji
Igwe nrụgide na-enwe nrụgide nke iPhones gara aga ejirila ya 3D Touch, ya mere ị gaghị enwe ike ịpịkwuo ike na ihe ọ bụla ọzọ
The iPhone 11 Maxgwọ Pro Max 1,149 maka nchekwa 64GB, 1,299 maka 256GB ma ọ bụ 1,499 maka 512GB na ojii, green, ọlaọcha ma ọ bụ ọlaedo.
n'ihi na ha tụnyere, the iPhone 11 Costsgwọ ọnụahịa 1,049, na iPhone 11 ụgwọ 729 na iPhone XR ụgwọ £ 629.
The OnePlus 7 ụgwọ £ 499, na Samsung Galaxy S10 ụgwọ 799 na Huawei P30 Pro ụgwọ 799.
A haziri nke na-arụ ọrụ na obere ntakịrị nke iPhone 5.8in 11 Pro nanị adịghị na gargantuan 6.5in iPhone 11 Pro Max, nke pụtara ekwentị Apple kachasị na-arịa ergonomics dị egwu.
Achọpụtara m na ịdị n'otu ahụ bụ schtick Apple, ma na nke a ọ na-arụsi ọrụ ike na-eme ka ngwaahịa ahụ ka njọ. N'ime ekwentị niile buru ibu m jiri kemgbe ọtụtụ afọ, arọ, amị amị iPhone 11 Pro Max na iPhone XS Max tupu ọ bụ naanị ha ga-enye m nnukwu aka mgbu. Ọ bụ n’ụzọ nkịtị ihe ihere na-ebe ákwá, n'ihi na ihe ọ bụla gbasara ya - site na igwefoto, ihuenyo na arụmọrụ - dị ukwuu.
Mgbe ọ ruru ya, naanị ezigbo epic Huawei-batrị batrị na-eweghachi iPhone 11 Pro Max ịbụ ngwaahịa ngwaahịa kpakpando atọ, ma ọbụnadị nke a bụ ekwentị kpakpando anọ dị oke ọnụ.
E nwere n'ezie mma, mfe-iji nnukwu ihuenyo smartphones dị na-eri budata ihe na-erughị agba-idobe £ 1,149 na elu Apple chọrọ maka iPhone 11 Pro Max.
Ma ọ bụrụ na ị ga-enwerịrị iPhone na ọmarịcha 5.8na iPhone 11 Pro anaghị egbutu ya, meere onwe gị amara ma chekwaa £ 420 ma zụta ya 6.1na iPhone 11. Naanị ndị chọrọ ezigbo ndụ batrị ụbọchị abụọ kwesịrị ịzụta iPhone 11 Pro Max, na ọbụna mgbe ahụ agaghị m.
Uru: amamiihe igwefoto, ọnọdụ abalị, mmiri na-eguzogide ọgwụ, wireless Nchaji, NJ ID, ezi ndụ batrị, ezigbo arụmọrụ, amamiihe ihuenyo, nkwado ngwanrọ ogologo
Ọghọm: siri ike ijide, arọ, dị oke ọnụ, ọ dịghị eriri isi, enweghị akara mkpisiaka aka, Enweghị ihe nkwụnye ọkụ n'ime igbe, ala na-amalite nchekwa
Otu igwefoto atọ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji nye gị nhọrọ ndị ọzọ, ma onye na-agba ụta 1x bụ isi ka kachasị mma. Foto: Samuel Gibbs / The Guardian
Samsung Galaxy S10 + nyochaa: a nnọọ pụtara ihuenyo
Samsung Galaxy Cheta 10+ nyochaa: ibu na ugbu a na wd anwansi
OnePlus 7 Nyochaa: Anụ zuru oke n'ụzọ niile
Huawei P30 Pro nyochaa: egwuregwu na-agbanwe igwefoto, kpakpando batrị
Ihe ngosi 3 nyochaa: ekwentị kachasị ụkpụrụ na nrụzigharị nwere ike ịzụta
← Apple Watch Series 5 aka-na Best ama 2019: iPhone, OnePlus, Samsung na Huawei tụnyere na họọrọ →